गरिबहरु कहिलेसम्म अस्पतालबाट भाग्ने ?
गरिब–निमुखाको लागि उपचार एक सपना भएको छ । हुन त पाइलैपिच्छे अस्पताल छन् । तर, त्यहाँ उपचार गर्न सानोतिनो खर्चले धान्न सक्दैन । सरकारी अस्पतालको भर छैन । अस्पतालका चिकित्सकहरु निजी अस्पताल र क्लिनिकमा धाइरहेका हुन्छन् । निजी अस्पलता एवं क्लिनिकले जसरी हुन्छ बिरामीबाट पैसा असुल्ने धन्दा गर्छ । यसरी उपचार प्रक्रिया झन्झटिलो र भ्रष्ट बनेका कारण सर्वसाधरण अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
नेपालमा गरिएका विभिन्न अध्यननहरुले कुल गरिबीको साढे ३ देखि ४ प्रतिशत औषधिकै कारण गरिब भएको तथ्यांक निकालेको छ । उनीहरु मध्ये १२ प्रतिशत मानिसहरु यही कारण वित्तीय संकटमा परे । नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियामै करिब ८० करोड जनसख्या अझै पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेको अनुमान गरिन्छ । यो पहुँच अरु कुनै कारणले नभएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले नै हो ।
सरकारले दीगो विकासको लक्ष्य अनुसार २०३० सम्म गरिबी अन्त्य गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । त्यसको लागि तेस्रो लक्ष्यमा आरोग्यता तथा कल्याण भन्ने उल्लेख छ । त्यसमा स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित गर्ने र सबै उमेरका सबै मानिसको कल्याणको प्रबर्द्धन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसको लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा सबैका लागि सुरक्षित, प्रभावकारी गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा अत्यावश्यक औषधि तथा खोपहरुमा पहुँच हाँसिल गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि समेत स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँच बढाउनुको विकल्प छैन ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुराको अभाव नहोस् भन्नको लागि सरकारले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्च गर्छ । स्वास्थ्य बीमा मार्फत् निरोगीहरुले रोगीको उपचार गर्ने र धनीहरुले गरिबको उपचार गर्ने अवधारणा पनि ल्याईएको छ । तर, स्वास्थ्य बीमामा नै धेरैको पहुँच नहुनु नै दुखद् पक्ष हो । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा एकातिर बीमा कम्पनीहरुको कमजोरी देखिन्छ भने अर्काे तर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि यसमा चुकेको पाइन्छ । केही उदाहरणहरुबाट यसको पुष्टि हुन्छ । गत चैत महिनामा एउटा समाचार आयो ।
प्रा. डा. शिवराज अधिकारी
घोडाघोडी १० का गौरीलाल चौधरीले स्वास्थ्य बीमा गरे तर बिरामी हुँदा बीमा अनुसारको सेवा पाएनन् । बीमा गरेको पाँचौं महिनामा निकै पेट दुख्न थालेपछि धनगढी स्थित सेती अञ्चल अस्पताल पुगेका उनले फार्मेसीमा निःशुल्क उपचार पाएनन् । स्वास्थ्य बीमा कार्ड देखाउँदा उनलाई छुट्टै कोठामा पठाएर फरक किसिमको व्यवहार गरियो ।
उनलाई राम्रोसँग परीक्षण नगरी औषधि लेखियो । त्यही औषधि लिन जाँदा फार्मेसीले औषधि छैन भनेर फर्काइदियो । त्यही कारणले उनले समय सकिएपछि बीमा नवीकरण गरेनन् । धनगढी होस् या त सोलुखुम्बु, यस्ता कैयौं उदाहरणहरु छन् जसले बीमाबाट उचित सुविधा नपाएपछि बीमा नवीकरण नै गरेनन् । कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण यति राम्रो व्यवस्था पनि अहिले अलपत्र परेको छ ।
बीमा सुविधा भनेको बिरामी नभएकाहरुले नै बिरामी भएकाहरुको उपचार गराउने व्यवस्था हो । जस्तो १०० जनाको बीमा भएको छ भने त्यसमा बढीमा ५ जना जति बिरामी हुन्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ । पैसा सबैले तिरेका हुन्छन् । त्यसमा बिरामी नहुने र स्वयं बिरामी हुनेको समेत पैसा मिलाएर उनीहरुको उपचार गरिने बिधि स्वास्थ्य बीमा ।
कमजोर आर्थिक हैसियत भएका र मध्यम आय भएकाहरुले समेत अस्पताल जाँदा धेरै पैसा खर्च हुन्छ भन्ने भयका कारण अस्पताल नजाने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । यसमा अस्पतालको नीति पनि जिम्मेवार छ ।
अस्पतालमा अनावश्यक रुपमा गराइने परीक्षण, एउटा अस्पतालले परीक्षण गरेको रिपोर्टलाई बिनाकारण अर्काे अस्पतालले नस्वीकार्ने परिपाटीका कारण पनि माथि उल्लेखित गरिबीहरुको समस्या बढी हुने गरेको हो । यही कारणले मध्यम र कमजोर आर्थिक हैसियत भएकाहरुलाई अस्पताल शब्दसँग नै त्रास हुने गर्छ । यसको समाधानको लागि पनि प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा आवश्यक देखिन्छ ।
गरिबीले स्वास्थ्यमा समस्या, स्वास्थ्यले गरिबी
अहिलेको मूल समस्या भनेको एउटा हामीहरु स्वास्थ्यका कारण गरिब भइरहेका छौं भने अर्काे तर्फ गरिब भएकै कारण पनि स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा हुनु परिरहेको छ । गरिबहरु हस्पिटल जाँदा धेरै पैसा खर्च हुन्छ भनेर अस्पताल जानै डराउने गरेको अवस्था छ भने मध्यम आय भएकाहरु निरन्तर अस्पताल जाँदा अनावश्यक परिक्षण र औषधिको धेरै खरिदका कारण गरिब हुने गरेका छन् ।
त्यसैले यो अवस्थालाई अन्त्य गर्दै आर्थिक स्थितिमा कमजोरहरुले पनि सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यही समस्याको लागि भनेर स्वास्थ्य बीमा योजनाको व्यवस्था गरिएको हो । जुन योजना अनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट त्यो सेवा इन्स्योरेन्सले किनिदिने प्रावधान छ । तर, त्यसमा पनि धेरैले गुणस्तरीय सेवा खोज्ने गरेका छैनन् । अरुले किनिदिने सेवा झनै गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
तर, अरुले दिएको सेवामा कत्तिको गुणस्तर छ ? भन्ने विषयमा प्रश्न गर्ने र खोजी गर्ने परिपाटी हामीसँग छैन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको पैसा उठाएपनि मन्त्रालय अन्तर्गत्कै अस्पतालहरुले बीमा अन्तर्गत्को सेवा दिने गरेका छैनन् । मन्त्रालयकै अधिकारीहरु नै बीमा बोर्डमा समेत कार्यरत हुन्छन् । जुन प्रभावकारी सेवाको लागि समेत बाधक कुरा हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको दोहोरो खर्च
अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोहोरो स्रोतबाट पैसा खर्च हुन्छ । यसले पनि व्यवस्थापनलाई भद्रगोल बनाइरहेको देखिन्छ । एकातिर स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुबाट उठेको पैसा पनि बिरामीको उपचारको लागि खर्च हुन्छ भने अर्थमन्त्रालयबाट बिनियोजन भएर आएको पैसा पनि यही शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । लामो प्रयासपछि २ वर्षअघि बल्ल स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी ऐन त आयो । तर, यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिन्छ । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर हरेक वर्षको डिसेम्बर १२ मा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज दिवस मनाउने गरिएको छ । यसले हेल्थ सिस्टम भित्र रहेका समस्याहरुलाई समाधानको बाटो देखाउने प्रयास गर्छ ।
यी हुन सरकारका नयाँ मन्त्री